लेख्ने बेला तपाईको हात काम्छ भने यी कुराहरुमा ध्यान दिनुस्- स्वास्थ्य - कान्तिपुर समाचार
लेख्ने बेला तपाईको हात काम्छ भने यी कुराहरुमा ध्यान दिनुस्
जेष्ठ १८, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — राईटर्स क्राम्प व्यक्तिको कार्य या व्यवसायसँग सम्बन्धित रोग हो । यसबाट प्रभावित व्यक्ति जब लेखन कार्य प्रारम्भ गर्दछ । त्यसबेला उसलाई यस्तो प्रतित हुन्छ, जस्तै बुढी औंला या औलाहरुमा शक्ति नै छैन । रोगको प्रारम्भमा हातका औलाहरुमा एक प्रकारको कडापन महशुस हुन्छ ।
उसलाई लाग्छ कि उसको हात जाम भईसकेको छ। यसको अतिरिक्त उसको हातमा कम्पन पनि हुनसक्छ। यसकारण रोगी लेख्ने बेलामा बढो मजबुतिसंग कलम या पेन्सिल समाउने चेष्टा गर्दछ। जति साबधानीले कलम समाउने या लेख्ने प्रयास गर्दछ, औंलाहरु त्यति नै बढि काम्ने हुन्छन्। क्रमश: यो कम्पन बिस्तारै –बिस्तारै हातबाट शुरु भई वा रोग पुरानो हुँदै गएपछि पुरै शरीरमा पनि कम्पन हुन सक्छ। यस कारणले गर्दा लेख्ने बेलामा कलम यताउता हल्लि रहन्छ र लेखाई पनि राम्रो हुँदैन, छिरबिरे सानो-ठुलो या बाङ्गो–टिङ्गो हुन जान्छ। कहिलेकहि औंला, हात र रिष्ट सामान्य काम न गरी असमान्य व्यबहार गर्न थाल्छन्। जस्तै, लेख्ने बेला बुढिऔंला भित्रपट्टी जान थाल्छ, रिष्ट (कलाई) बाहिर तिर जानु, औंलाहरु माथीतिर फर्किनु आदि। यो समस्याले गर्दा उसको सम्पूर्ण जीवन अस्तब्यस्त हुन जान्छ। उसको मन मस्तिष्कमा गहन बेचैनी र तनाव पैदा हुन्छ। यो बेचैनी अझै बढ्दै गएर चिकित्सक कहाँ पुग्दा पनि चिकित्सकले उसको रोग ठम्याउन सक्दैन।
भौतिक दृष्टिले हेर्दा उसको हातका मान्सपेशीहरुमा कुनै प्रकारको खराबी देखिंदैन। रोगी यसको लागि जति बढि चिन्तित् हुन्छ त्यति नै मानसिक तथा स्नायु सम्बन्धि अवसाद बढ्दछ। साथै हातको अन्य मांशपेशीहरु पनि तनावग्रस्त हुन्छन्। बैंकमा हस्ताक्षर गर्दा, रिस उठेको बेला, तनावको अवस्थामा कुनै कार्यलाई चाँडै गर्नुछ अथवा अपरचित व्यक्तिको सम्मुख लेख्ने कार्य लगभग असंभव हुन्छ। फलस्वरुप धेरै दिनसम्म यस्तै हालतमा रहियो भने टाउको दुख्ने, चक्कर लाग्ने, स्नायु दुर्बलता जस्ता समस्याहरु हुन सक्छन्।
बिरामीले लेख्ने कार्य बन्द गर्ने बितिक्कै उसको सबै समस्याहरु समाप्त भएर जान्छ। यस प्रकारको रोगी या त लेख्न कार्य नै बन्द गरि दिन्छन् या अर्को हातबाट लेख्ने कार्य शुरु गर्दछ अर्थात दाहिने हातले लेखन कार्य गर्ने रोगी त्यसै कार्यलाई देब्रे हातले गर्ने प्रयास गर्न थाल्छ। तर यस्तो पनि देखिएको छ कि कलान्तरमा पछि गएर त्यस हातमा पनि यहि दोष उत्पन्न हुन थाल्दछ। यस प्रकारको रोगीलाई लेख्ने कार्यको अलावा आफ्नो दाह्री बनाउदा, आफ्नो सर्टको टाँक लगाउन, कस्मेटिक सौन्दर्य प्रसाधनको प्रयोगमा तथा खाना खानमा पनि अप्ठ्यारो हुन सक्छ। यसप्रकारको तनाव या कम्पन अनुहार या शरीरको अन्य भागमा, जिब्रो वा गर्धनमा पनि हुन सक्छ। यसलाई चिकित्सिय भाषामा फोकलडिस्टोनिया या आक्युपेशनल डिसटोनिया भनिन्छ।
राईटर्स क्राम्प/कम्पन्न रोगको लक्षण : लेख्ने बेला हातमा या हातको कुनै भागमा कम्पन, कडापन, सुन्नपन, दर्द, तनाव हुनु। जसले गर्दा हस्ताक्षर गर्न असमर्थ हुनु। केहि बाक्य लेखि सकेपछि शब्दहरु बांड्गो–टेड्गो हुनु र लेखाई खराव हुनु। लेख्न कार्य को गतिमा कमि हुनु र बढि लेख्न नसक्नु। लेख्ने समयमा हात या हातको कुनै भाग भित्र–बहिर पट्टि स्वत मोडिनु। लेख्ने बेला पेन या पेन्सिललाई मजबुत किसिमले समाउनु, लेख्ने समय कलम स्वत, हातबाट झर्नु। लेखन कार्य गर्दा हात व्यक्तिको नियन्त्रमा नहुनु। यसका प्रमुख लक्षणहरु हुन्।
यसमा दिईएका लक्षणहरु मध्ये यदि कुनै पनि लक्षण तपाईमा छ भने बेलामै सावधान हुनुहोस्। यस रोगको शुरुवात भएको जस्तो छ। यो रोग कुनै पनि उमेरमा लेखन कार्य गर्ने, स्टोनो-टाईपिष्ट, प्रशासनिक कार्यमा लागेको व्यक्ति, लेखक वा लेखाका कर्मचारी, ड्राफ्ट्सम्यान, चिकित्सक (सर्जन) ईन्जिनियर, केमिष्ट,पियानो बजाउने, कार्पेन्टरको काम गर्ने व्यक्तिलाई हुन सक्छ। साधारणतया १७ देखि १८ वर्षका उमेरका व्यक्तिहरुमा शुरु हुन सक्छ। तर, रोगीलाई मेरो रोग यहि नै हो भनेर सम्झन-बुझ्न वर्षौ लाग्न सक्छ। यसो हुनुको कारण भनेको लक्षणहरुलाई रोगी अथवा उसका आफ्न्तहरु शुरुमा शारीरिक कमजोरी, रोगीको लापरवाही या मनोवैज्ञानिक समस्या हो भनेर सम्झिन्छन्।
कारण: यस सम्बन्धमा मनोबैज्ञानिकहरु एकमत देखिंदैनन्। केहिको भनाइअनुसार यो एक प्रकारको स्नायुमण्डलीय बिकार हो। केहि मनोबैज्ञानिकहरुका अनुसार यो एक प्रकार मानसिक रुप (मन) ले उत्पन्न भएको शारीरिक (तन) को रोग हो। केहि चिकित्साहरुका अनुसार मस्तिष्कमा अवस्थित 'उपांग वेसल गैंगलियान'ले ठिकसँग काम नगर्नु हो। यस उपांगको कार्य शरीरका बिभिन्न अगंहरुमा समन्वय बनाएर राख्नु हो। वेसल गैंगलियान उपांगको गडबडिको कारण यस रोगबाट प्रभाबित अगंले - मस्तिष्कले पठाएको निर्देशन अनुसार कार्य या व्यवहार गर्दैन। जसको फलस्वरुप रोगीलाई, यस रोगबाट प्रभाबित अंगमा कडापन, कम्पन आदि जस्तो समस्या हुन्छ।
यसको कारण जे जस्तो भएपनि यस रोगबाट पीडित रोगीको सम्बन्ध अचेतन वा सुसुप्त मनसँग कुनै न कुनै स्तरबाट जोडिएको हुन्छ। राईटर्स क्राम्पका प्राय जसो रोगी अतिरिक्त तनावले ग्रस्त भएका हुन्छन्।
रोगको निदान: यस रोगको निदान मुख्य रुपमा रोगीको व्यक्तित्वलाई अध्ययन गर्नुका साथै लेखाइको जाँच गरिन्छ। रोगीले दिनभरिमा कति लेख्द छ? कस्तो लेख्द छ? लेखाईको गति कस्तो छ? आदि कुराको परख गरिन्छ। यसबाहेक आवश्यकता अनुसार उसको मांपेशीहरुको बिद्युतीय गतिबिधिको जाँच (ईएमजी) र घाँटीको एक्स-रे पनि गरिन्छ। जसद्वारा यी लक्षणहरु यसै रोगको हो वा अन्य कुनै रोग को हो भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।
हीमियोप्याथिक उपचार: होमियोप्याथिक उपचारमा रोगीको मानसिक एवं शारीरिक तथा पारिवारिक, आर्थिक ,सामाजिक अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखेर यदि उपयुक्त औषधिको चयन गर्न सकियो भने यस रोगमा स्थाई एवं अप्रत्याशित फाईदा हुन्छ। जसलाई यो समस्या भएको धैरै समय भएको छैन त्यस्ता रोगीले उपचार गर्दा ३/४ महिना भित्र फाईदा भएको देखिन्छ भने रोग पुरानो भएमा बढि समय लाग्न सक्छ। धेरै जसो रोगीहरुमा राईटर्स क्राम्प रोगका लक्षणहरुको मुक्ति पछि पनि रोग पुन: देखा पर्दछ। त्यसैले फाईदा भए पछि पनि बिरामीले औषधिको सेवन चिकित्कको सल्लाह बिना बन्द गर्नु हुँदैन। पुरा कोर्ष गर्नु पर्दछ ताकि रोगको पुनरावृतिको संभावना नरहोस। यस रोगमा प्रयोग हुने केहि औषधिहरु निम्न लिखित छन।
औषधिहरु: मेगफाँस, कलकेरियाफाँस, नेट्रमफाँस, नेट्मम्युर, कालिम्युर, साईलिशिया, कल्केरिया कार्ब, जिकंममेटालिकम, मर्कसल, कुप्रम मेटालिकम, साईक्लामेन, एनाकर्डियम, चेलिडोनियम, स्टेनम, सलफर आदी।
प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०७५ १७:४७
जेष्ठ ९, २०७५ डा. ललित कुमार मिश्र
काठमाडौँ — बवासीर या पाइल्सलाई मेडिकल भाषा मा हेमरॉइड्सको नामले जानिन्छ । यसमा गुदामार्ग (ऐनस) को भित्रि र बाहरी क्षेत्रका साथै मलाशय (रेक्टम) को तल्लो भागको शिरा (वेन)हरु सुन्निएर आउँछ । जसको फलस्वरुप ऐनसको भित्र र बाहिर या कुनै एक ठाउँमा मस्साको जस्तो दाना बन्न जान्छ ।
यो मस्सा कहिले भित्र रहन्छ भने कहिलै बाहिर पनि निस्किन्छ । करीब ७०% प्रतिशत मानिसहरु आफ्नो जीवनमा कुनै न कुनै बेला पाईल्सको समस्याबाट गुज्रिन्छन् ।
उमेर बढ्नुको साथै पाईल्सको समस्या पनि बढ्न सक्छ । यदि परिवारमा कसैलाई यो समस्या रहेको छ भने, अन्य सदस्यलाई पनि हुने संभावना बढि हुन्छ । मानिसको जीवनशैलीसँग जोडिएको यो रोग आनुवांशिक समस्या पनि हो । धेरै जसो व्यक्तिहरु प्राय: गरी मलद्वारसँग सम्बन्धित रोगहरुलाई बाबासिर या पाईल्स नै हो भनेर सम्झिन्छन् । तर मलद्वारका अरु कयौं रोगहरु पनि हुनसक्छन्, जसलाई तपाई पाइल्स सम्झिरहनु भएको छ भने त्यो पाईल्स नभएर फिशर पनि हुन सक्छ । वार्टस (मुसा) मस्साको रुपमा मलद्वार वरिपरि हुन सक्छ ।
कहिले काही एनल कैनालको वरिपरिको क्षेत्रमा चिरिएको (क्रेक) जस्तो स्थिति बन्न जान्छ । जसलाई फिशर भनिन्छ । यो दरार सानो पनि हुन सक्छ र ठुलो पनि । यसबाट पनि दिशा गरे पश्चात रगत आउँछ ।
-एनसको वरिपरि कडा किसिम गाँठो जस्तो महशुस हुन सक्छ । यसमा रगत जमेको हुनसक्छ । जसले गर्दा एनस धेरै दुख्ने हुन्छ । दिशा गरिसकेपछि पनि यस्तो महशुस हुन्छ कि पेटसफा भएन । मल त्याग गर्ने बेला दर्द हुनु, सिन्कोले घोचेको जस्तो मलद्वारमा अनुभव हुनु । दिशा गर्ने बेला म्युकस (आउँ) दिशामा देखिनु र दर्द महशुस हुनु । दिशा गर्ने बेला रगत आउनु । एनसको बरिपरि चिलाउनु, त्यो क्षेत्र रातो हुनु र सुन्निनु आदि ।
पाइल्सको प्रकार :
(क) भित्रि पाइल्स (यसमा रगत पनि आउँछ) :
स्टेज १: शुरुको स्थितिमा ऐनसको भित्रि भागमा सानो गाँठो जस्तो सुन्निएको हुन्छ । प्राय, गरी यो देखिदैन पनि । यसमा कुनै प्रकारको दर्दपनि हुँदैन । दिशा गर्ने बेलामा रगत आउँछ भन्ने कुरा बिरामीले भन्छ ।
स्टेज २: यस अवस्थामा पहिलाको भन्दा भित्रि भाग बढि सुन्निएको हुन्छ । दिशा गर्ने बेला जोर गर्दा रगत आउनुको साथै मस्सा (डल्लो) जस्तो पनि बाहिर आउछ । तर औलाले ठेल्दा सजिलैसित भित्र जाने हुन्छ ।
स्टेज ३: यो अवस्थामा पाइल्सको स्थिति बढो गम्भिर हुन्छ । यसमा सुन्निएको भाग या मस्सा (डल्लो) बाहिर तिर झुन्डि रहन्छ । औंलाको सहायताले पनि यस (डल्लो) लाई भित्र पठाउन सकिंदैन । यि मस्सा ठुला आकारका हुन्छन् र सधै बाहिरतिर निस्केको हुन्छ । ईन्टरनल पाइल्सलाई नै रक्तस्राबी बाबासिर भनिन्छ । दोस्रो या तेस्रो स्टेजको पाइल्समा दिशा गरिसके पछि कुनै पनि प्रकारको तेल लगाएर मस्सालाई भित्र ठेलदिनु पर्दछ । बाहिर रहयो भने ईनफेक्सन हुने डर रहन्छ ।
(ख) बाहरी- एक्सट्रनल पाईल्समा प्राय: दिशा गर्दा रगत आउँदैन ।
यसलाई मेडिकल भाषामा पेरिएनल हेमाटोमा भनिन्छ । यो हेर्दा सा-सानो गाँठो या सुन्निएको जस्तो हुन्छ । यो एनस को बाहिरी सतहमा रहन्छ । यो अत्याधिक चिलाउने हुन्छ । यदि यसमा रगत जम्मा भयो भने दर्द हुन्छ र तुरुन्तै उपचारको आवश्यकता हुन्छ ।
कारण : पुरानो कब्जियत हुनु र मल त्याग गर्दा बढी जोर लगाउनु । गुदा मैथुन गर्नु । लगातार र बारम्बार पखाला लाग्नु । लगातार वजनदार चिज उठाउनु । मोटोपना । निष्क्रिय जीवन शैली । गर्भावस्थामा पनि धेरेजसो महिलाहरुमा पाईल्सको समस्या हुन्छ ।
कब्जियत पाईल्स हुनुको प्रमुख कारण हो । यसबाट बच्नको लागि भरपुर मात्रामा हरियो रेशादार सागसब्जीहरु खानु पर्दछ । सिजन अनुसारको फलफुल खाने र प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने । यसबाट दिशा साफ्ट हुन्छ कन्नु पर्दैन । सॉफ्ट र मोयाईश्चर युक्त ट्वाइलेट पेपरको प्रयोग गर्ने । खुकुलो अन्डरबेयर लगाउने । टाइट अण्डरवेयरको कारणले पाइल्सको (डल्लो) मा घर्षण हुन सक्छ जसले गर्दा बिरामीलाई अप्ठायारो हुनसक्छ ।
पाइल्सको बिरामीलाई मल त्याग गरेपछि पनि यस्तो अनुभव हुन्छ कि अझ दिशा आउला कि । यसको लागि जोरले कन्ने गर्दछन् । यो विरामीका लागि घाट्टक हुनसक्छ । दिशा अझ आउने सेन्सेशन बिरामीलाई पाईल्स (मस्सा) को कारणले हुन्छ । बास्तवमा पेट सफा भईसकेको हुन्छ । अत, बल नगर्ने । कोशिस गर्ने कि पाँच/सात मिनेटको भित्र फाईरिगं भएर बाहिर निस्किने । दिशा आए या नआए पनि एक निश्चित समयमा ट्वाइलेट जाने बानी बसाल्ने । ट्वाइलेटमा बसेर मोबाईलमा गीत सुन्ने, गेम खेल्ने, पेपर या कुनै किताब पढ्ने कार्य गर्नु हुदैन ।
पाईल्सको प्रारम्भिक चरणमा यसको उपचार गर्न आवश्यक छ । अन्यथा यो गम्भिर समस्यामा बदलिन सक्छ । यदि पाईल्सको उपचार गरिएन भने रेक्टल अल्सर/क्यान्सर पनि हुनसक्छ ।
खानपान: के नखाने - ननभेज, मसालादार खाना, केक, पेस्ट्री र मैदाबाट बनेको खानेकुराहरु नखाने । जंकफुड, तैलीय र बोसोयुक्त खाना नखाने । चिया, कफि, अल्कोहल र बियर नपिउने । के खाने - मेवा, चिकु, अंजिर, केरा, नासपाति, अंगुर, स्याउ जस्ता फलफुलहरु खाने । सलादमा गाजर, मुला खाने । हरियो साग सब्जिहरु बढि खाने । चोकर समेतको पिठोको रोटी, मल्टिग्रेन ब्रेड खाने । दिनमा कमसे कम बाह्र गिलास पानी पिउने ।
होमियोप्याथिक उपचार : होमीयोप्याथी मा पाइल्स/फिशरको उपचारको लागि राम्रो प्रभावकारी औषधिहरु छन् । होमीयोप्याथीको मान्यता अनुसार पाइल्सका दश प्रतिशत केशेजहरुमा मात्र सर्जरीको आवश्यकता पर्दछ । नब्बे प्रतिशत केशेजमा औषधिद्वारा नै ठिक गर्न सकिन्छ । रोगिको मानसिक एवं शारीरिक लक्षण अनुसार यस रोगमा प्रयोग गरिने केहि होमियोप्याथिक औषधिहरु निम्न लिखित छन् । नन-ब्लिडिंग पाइल्समा एंटिम क्रूड, एसकुलस, एलोज, नक्स वोमिका, सल्फर प्रयोग गर्न सकिन्छ । पाइल्सबाट रगत आउछ भने हैमेमेलिस, मिलेफोलियम, फॉस्फोरसको प्रयोग गर्न सकिन्छ । पाइल्समा दर्द ज्यादै छ भने रैटेहनिया, पियोनियाको प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्रेग्नेन्सीमा यदि पाइल्स छ भने कोलिन सोनिया, पल्सैटिला, सीपिया प्रयोग गर्नु पर्छ ।
उपरोक्त होमियोप्याथिक औषधीहरुको प्रयोग आफ्नो नजिकको योग्य तथा अनुभवी चिकित्सकसंग परामर्श लिएर मात्र सेवन गर्नु या गराउनु उचित हुन्छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ ९, २०७५ १८:३६
पेट एक्कासि दुख्यो ?- ‘एपेन्डिसाइटिस’ हुन सक्छ
ढाड दुख्ने समस्या हटाउन योग
औषधीय गुणयुक्त तुलसी
यौनसम्बन्धले पनि डेंगु
इन्फ्लुएन्जा जाडोमा हुने जोखिमबाट बच्न खोप